Miaraka Remote Buddy azonao ampiasaina ny Siri Remote vaovao amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Miaraka Remote Buddy azonao ampiasaina ny Siri Remote vaovao amin'ny Mac
Toni Cortes | 31/05/2021 14:00 | Fampiharana hafa ho an'ny Mac
Iray amin'ireo zava-baovao farany manandanja an'ny vaovao Apple TV 4K tsy misy isalasalana fa ny Siri Remote anao. Fanaraha-maso lavitra tena mahomby, raha ampitahaintsika amin'ny maodely Siri Remote teo aloha. Eny, hoy ny baiko vaovao, afaka mividy malalaka amin'ny 65 euro ianao, ary amin'ny fampiharana dia azonao ampiasaina hifehezana ny Mac anao.
Ny fangatahana resahina dia olom-pantatra taloha, Ry sakaiza lavitra, izay vao nohavaozina ao anatin'izany ny Siri Remote vaovao an'ny Apple. Famenon-tsakafo tonga lafatra amin'ny fampisehoana ampahibemaso avy amin'ny Mac.
Ny vaovao Siri Remote izay miaraka amin'ny taranaka vaovao Apple TV 4K dia nahomby. Miaraka amin'ny endriny nohavaozina izay mampiditra trackpad / clickpad 5-lalana, dia azo ampiasaina tsara izany ankoatry ny fanaraha-maso ny Apple TV.
Fanavaozana vaovao ho an'ny fampiharana Remote Buddy no manao an'izany, afaka mifehy Mac amin'ny Siri Remote vaovao amin'ny Apple TV. Remote Buddy dia manolotra ny fahaizana mampiasa lavitra any ivelany macOS ary ankehitriny dia natambany ihany koa ny Siri Remote vaovao.
Avy amin'ny Keynote, Music, Safari, ary ny ankamaroan'ny fampiharana Apple tompon-tany ka hatrany amin'ny rindrambaiko ankolafy fahatelo, Remote Buddy dia manolotra fanampiana mihoatra ny Ny fampiharana 100. Izy io koa dia miasa miaraka amin'ny YouTube, Netflix, ary amin'ny tranonkala hafa rehetra.
Remote Buddy 2.0 dia misy izao miaraka amin'ny lisitr'ireo endri-javatra tsara nampiana miaraka amin'ny fanohanan'ny Siri Remote vaovao. Misy fomba telo ahafahanao mampiasa ny Siri Remote amin'ny Mac anao: Trackpad, Remote Control, ary Virtual Keyboard.
Remote Buddy dia manome anao fitsapana 30 andro maimaim-poana sy fividianana indray mandeha 24,99 Euros ao amin'ny Malagasy. Ilay Siri Remote vaovao dia ahitanao azy ao amin'ny Apple Store miaraka amin'ny vidin'ny 65 Euros. Ny sety dia famenon-javatra mety indrindra raha matetika ianao no manatrika imasom-bahoaka na amin'ny fivorian'ny Mac.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Programa Mac » Fampiharana hafa ho an'ny Mac » Miaraka Remote Buddy azonao ampiasaina ny Siri Remote vaovao amin'ny Mac